Shiinaha Q345B ERW Round Steel Pipe For Ecuador warshad iyo saarayaasha |Zhanzhi
Q345B ERW Dhuumaha Birta Wareega ee Ecuador
Dhuumaha ERW waxay u taagan tahay tuubada alxanka iska caabinta Korontada, oo muujisa hufnaanta kharashka iyo dulqaadka dhumucda gidaarka oo dhow marka la barbar dhigo dhuumaha birta ah ee aan xidhnayn.Waxaa si weyn loogu isticmaalaa deyrka, xoqida, injineernimada, iwm. Si loo hubiyo saxnaanta sare iyo tayada ERW Pipe, SMC waxay isticmaashaa qalab tayo sare leh, waxayna leeyihiin koontarool tayo adag.
1) Fasalka: Q345B, API X42-X80, L245, J55
2) Dhexroorka dibadda: Φ219-Φ660mm
3) Dhumucda gidaarka: 6-22mm
4) Dhererka: 3-12m, la habeeyay
5) Tijaabi: baaritaanka biyaha, ogaanshaha ultrasonic, baaritaanka ultrasonic ee dhamaadka tuubada, kormeerka muuqaalka iyo cabbirka, miisaanka iyo cabbirka, iwm.
DN NPS mm HEERKA XOOG BADAN SCH40
Alxanka caabbinta wuxuu leeyahay sifooyinka waxtarka wax soo saarka sare, qiimaha jaban, badbaadinta alaabta iyo qalabaynta fudud, sidaas darteed waxaa si ballaaran loo isticmaalaa duulista, hawada, tamarta, elektiroonigga, baabuurta, warshadaha iftiinka iyo qaybaha kale ee warshadaha, waana mid ka mid ah hababka alxanka ee muhiimka ah. .Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya tuubada birta ERW iyo tuubada birta ah ee aan kala go'a lahayn waa in ERW leedahay alxanka, kaas oo sidoo kale fure u ah tayada tuubada birta ERW.Dhuumaha ERW waa "beeb bir alxan leh oo iska caabin heersare ah", taas oo ka duwan habka alxanka ee tuubada alxanka ee caadiga ah.Alxanka waxaa lagu sameeyaa iyadoo la dhalaalinayo birta saldhigga ah ee jirka xariijimaha birta ah, xooggeeda makaanikadana way ka fiican tahay tan tuubooyinka alxanka ah ee caadiga ah.
1) Faa'iidada dhaqaalaha: Dhuumaha birta ee ERW way ka qaalisan yihiin tuubooyinka birta ah.
2) Saxnaanta Sare: Dhuumaha birta ee ERW waxay leedahay dulqaad u dhow dhumucda derbiga marka la barbar dhigo tuubada birta aan si fiican u socon.
Dhuumaha birta ERW waxaa si weyn loogu isticmaalaa duulista, hawada sare, tamarta, elektiroonigga, baabuurta, warshadaha iftiinka iyo qaybaha kale ee warshadaha.Dhuumaha birta ee ERW waxaa loo isticmaalaa in lagu qaado saliidda, gaaska dabiiciga ah iyo walxaha kale ee dareeraha ah, kuwaas oo buuxin kara shuruudaha kala duwan ee cadaadiska sare iyo hoose.Waqtigan xaadirka ah, waxay door muhiim ah ka ciyaartaa duurka dhuumaha gaadiidka ee adduunka.